White Gold Set2- Forever Gems
White Gold Set 2
ဒီထုတ်ကုန်သည်ှStock ကုန်ခါနီးနေပြီ။
1 x WGBG4 ရွေဖြူပုံဆန်းလက်ကောက်
Ks. 1,903,800 Ks. 2,004,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
1 x Ring WGRN4
Ks. 260,300 Ks. 274,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
1 x WGCN4 White Gold...
Ks. 1,244,500 Ks. 1,310,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
1 x WGER4 White Gold...
Ks. 223,250 Ks. 235,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
White Gold Set 1
White Gold Set 3
White Gold Set 4
White Gold Set 5